Ity no tantaran'ny logo Google | Famoronana an-tserasera
Imbetsaka isika no afaka mieritreritra fa saika teraka araka ny ahalalantsika azy ankehitriny ny sary famantarana iray, saingy matetika no mitranga fa mitaky fandehan-javatra rehefa mandeha ny fotoana, matetika, dia mahavariana tokoa. Tsy vao sambany no nandalo ny pejinay ireo fivoarana sy foto-kevitry ny marika samy hafa marika, toa an'i Adidas, inona no efa nohatsaraina mba hahatratra ny fironana ankehitriny na omeo fanovana tsara izy io hanolotra idealy hafa manakaiky ny serivisy omeny.
Uno Ny iray amin'ireo ohatra mazava indrindra amin'izany dia ny tantaran'ny sary famantarana Google, iray amin'ireo goavambe ara-teknolojia izay nanana dia nahaliana tokoa nandritra ny fotoana nandalinana ny sasany amin'ireo fanovana lehibe indrindra amin'ny sary famantarana. Noho io antony io dia ho fantatsika ireo dingana manan-danja indrindra amin'ny sary famantarana izay naka fotoana mba hahatongavany ankehitriny ary izay voasokitra tsara ao an-tsain'ny olona an-tapitrisany maro manerantany.
1 Ny fiandohan'ny tantaran'ny sary famantarana Google
2 1998, taona anaovan'ny Google loko maro kokoa
3 Ny taona 1999 dia taona manaloka sy 3D
4 1999 ary manohy mitombo mankany amin'ny fanjakazanana isika
5 Tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2013
6 Loko loko manomboka amin'ny 2013 ka hatramin'ny 2015
7 Ary 2016, Google ankehitriny
8 Ary tsy hijanona eto daholo ny zava-drehetra
Ny fiandohan'ny tantaran'ny sary famantarana Google
Nanomboka ny orinasa raiso ny orinasanao raha vao tamin'ny 1997 rehefa nipoitra avy amin'ilay anarana teo aloha antsoina hoe "BackRub." Tao anatin'izay taona rehetra izay, roapolo taona lasa izay, ity orinasa ity dia nandalo fanovana 14 hahatratra ny sary famantarana izay fantatsika rehetra ankehitriny. Amin'izany no anamafisantsika mazava fa tsy voninkazo isan'andro izy io, fa ny hoaviny dia efa niasa hatry ny ela.
Tamin'ny 1997 dia Larry Page sy Sergey Brin, izay mieritreritra ao ambadiky ny G lehibe, Nanapa-kevitra ny hanome izany logo "BackRub" izany izy ireo ary mamoaka ilay hevitra handoko ny sary famantarana Google voalohany.
Ity sary famantarana ity hita voalohany tao amin'ny lohamilin'ny Stanford University ary sambatra ny naharitra herintaona mandra-pahatongany nahazo fifandraisana tamin'ny 1998.
1998, taona anaovan'ny Google loko maro kokoa
Amin'ireo litera hafahafa kokoa ireo, miaraka amin'ny loko izay toa nalaina tamina modely Photoshop tena fototra, dia hitantsika izany nohafarana ny typografia ary miova endrika ny zava-drehetra mahitsizoro misimisy kokoa hiseho famantarana mifantoka tanteraka.
Fiovana vaovao izay dia hiara-dalana amin'ireo zava-nitranga tao amin'ilay orinasa fa lalana hafa no narahiny ary mampiseho tsara izany logo izany, miaraka amin'ireo loko manaitra, saingy misy endrika mahitsy kokoa.
Ny taona 1999 dia taona manaloka sy 3D
Nandalo i Google misafidy ny alokaloka sy ny vokatra 3D izay mamela topy maso ny fivoarana avy amin'ireo endrik'ilay sary famantarana tamin'ny taon-dasa. Ireo vokatra ireo dia manome fahatsapana hafa amin'ny sary famantarana izay nafindra tamin'ny tanjon'ny loko voalohany amin'ny kodiarana loko. I Ruth Kedar dia tonga niaraka tamin'ireny loko ireny mba hananana orinasa manana fahafinaretana feno kokoa amin'ny tànany.
Ny tena manokana, amin'ny tenin'i Kedar manokana, ny hevitra dia ny haseho fa tsy nanaraka ny fitsipiky ny hafa i Google, ary noho izany ny fiovana amin'ny loko faharoa an'ny «L».
Ny iray amin'ireo tsy fitoviana miharihary dia izany ny «G» dia niova ho manga ary ny litera sisa tavela tamin'ny maintso dia ny "l". Lamina izay mitohy mandraka androany ary tsy niova nanomboka tamin'io taona io.
1999 ary manohy mitombo mankany amin'ny fanjakazanana isika
Ny zavatra mahaliana indrindra amin'ity taona ity dia ny logo Google, amin'ny fanovana iray hafa tena mahaliana, manolotra ny sary omen'ny G lehibe an'izao tontolo izao rehefa manomboka mandray ny toerana izy ho an'ny fanapahana manerantany amin'ny maha-motera fikarohana.
Taona iray izay nahitana foto-kevitra samihafa, ary anisany ny iray ny mainty dia misongadina indrindra ary ny zanatsoratra voalohany dia miampita eo anelanelan'izy ireo amin'ireo loko fantatsika rehetra.
Gaga amin'ny farany fa nalain'i G lehibe ny fanapahan-kevitra hanatsotra ny zava-drehetra miaraka amin'ny sary famantarana fa mitovy amin'ny mahazatra foana izy io, na dia misy tsipika be fikaingo kokoa aza, ny alokaloka amin'ny fomba tsara kokoa sy ny loko fantatry ny rehetra.
antsika hijanona amin'ity logo ity izahay mandra-pahatongan'ny 2010 ary ho mariky ny fotoana manan-danja niainan'ilay orinasa ho lasa milina fikarohana izay manatsara ny ampahany amin'ny lahasan'ny olona an-tapitrisany.
Tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 2013
The Mountain View Boys esory ny alokaloka ary avelao ny sary famantarana miaraka amin'ny loko hatrany, eny fa na dia ny hampamirapiratra ny feo aza mba ho tsara kokoa amin'ilay fiovana izy ireo ao anatin'ny telo taona
Loko loko manomboka amin'ny 2013 ka hatramin'ny 2015
Fanovana iray hafa ho an'ny logo Google ho alohan'ny fenitry ny famolavolana ireo taona ireo izay nandraisan'ny loko loko toerana an-tsehatra amin'ny fampiharana sy serivisy maro.
Ity fanovana ity dia naseho tamin'ny endritsoratra ihany fa malama kokoa ny zorony ary hanamora ny famakiana azy rehefa nanomboka nampiasa finday an-tapitrisany erak'izao tontolo izao ny mpampiasa.
Ary 2016, Google ankehitriny
Tamin'ny taon-dasa dia nahita fiovana lehibe iray hafa isika Google dia nofaritana tamina taratasy iray, ny "G". Raiso ny loko rehetra atambatra ary miforà amin'ireo loko tasy mba hanondroana ny marika.
Fanovana ny sary famantarana mampiseho ny ho avin'ny orinasa mitazona SO ho an'ny fitaovana finday napetraka indrindra eto an-tany ary manova ny endrik'ilay planeta miaraka amin'ireo hevitra mahaliana indrindra mankany amin'ny Deep Learning na ny fahafaha-manao resaka voajanahary noho ny zava-misy ao amin'ny Google Assistant.
Ary tsy hijanona eto daholo ny zava-drehetra
Podemos makà toro lalana vitsivitsy avy amin'ny Google miaraka amin'ny fivoaran'ny log anaona. Ny tena lehibe dia ny fanovana mitohy izay hitantsika ihany koa tamin'ny nanombohany ny milina fikarohana ka hatramin'ny inona ny rafitra fiasa samihafa hanjakan'ny finday toy ny finday avo lenta ankehitriny.
Mazava amintsika izany Google dia nilalao tsara ny karany ary ny fanovana ny sary famantarana dia mampiseho ireo fanovana lehibe ireo. Nanatri-maso ny famoronana abidia aza izahay, mutation iray hafa an'ny orinasa mankany amin'ny faritra hafa ary hanana ny anjara asany lehibe indrindra izany amin'ny taona ho avy.
Tianao ve ilay tantaran'ny google logo? Ahoana araka ny hevitrao no hivoatra amin'ny ho avy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny tantaran'ny sary famantarana Google